I-China I-Steel Frame Frame Yokwakheka Kwensimbi Esakhiwe Kwensimbi Yensimbi Enabakhiqizi beSitifiketi se-CE nabaphakeli | Henglida
China Steel Uzimele Prefabricated Steel Structure Building for Steel Warehouse with CE Certificate
I-LIDA isakhiwo sensimbi (isakhiwo sangaphambi kobunjiniyela) uhlobo olusha lohlelo lwesakhiwo sokwakha. Uhlelo lokwakhiwa kwesakhiwo lwakhiwa uhlaka oluyinhloko ngokuxhumanisa isigaba H, isigaba C, isigaba Z noma izingxenye zensimbi U. Uhlelo lokufaka lusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapaneli njengodonga nophahla kanye nezinye izinto ezifana namawindi neminyango.
LIDA isakhiwo sensimbi (isakhiwo sangaphambi kobunjiniyela) uhlobo olusha lohlelo lwesakhiwo sokwakha. Uhlelo lokwakhiwa kwesakhiwo lwakhiwa uhlaka oluyinhloko ngokuxhumanisa isigaba H, isigaba C, isigaba Z noma izingxenye zensimbi U. Uhlelo lokufaka lusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapaneli njengodonga nophahla kanye nezinye izinto ezifana namawindi neminyango. Izakhiwo zensimbi ezenziwe ngaphambilini ze-LIDA zinezinzuzo zesikhala esibanzi, amandla aphakeme, isisindo esincane, izindleko eziphansi, ukuvikelwa kokushisa, ukonga amandla, ukubukeka okuhle, isikhathi esifushane sokwakha, ukusebenza okuhle kokufakwa, ukusebenzisa impilo isikhathi eside, ukusebenza kahle kwesikhala, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, ukwakheka okuguqukayo, njll.
Iminyaka engama-50 yokuphila isikhathi eshibhile ngezindleko zokwakha eziphansi. Isakhiwo sesakhiwo seLida Steel sifaka indawo yokugcina impahla yensimbi, indawo yokusebenzela yensimbi, i-hangar yensimbi, ishede, isakhiwo esinezitezi eziningi, indlu eluhlaza, ipulazi lezinkukhu, njll.
Isikhala se-1.Wide: i-span eyodwa noma ama-spans amaningi, i-max span ingama-36m ngaphandle kwekholomu ephakathi.
Ukwakhiwa 3.Fast futhi ukufakwa lula.
4.Long usebenzisa impilo: kuze kube yiminyaka engama-50.
5.Others: ukuvikelwa kwemvelo, isakhiwo esizinzile, ukumelana nokuzamazama komhlaba, ukufakwa kwamanzi okuhlola, nokonga amandla.
Uhlaka oluyinhloko (amakholomu nemishayo) lwenziwe ngensimbi yensimbi engu-H eshiselwe.
Amakholomu ama-2 axhumene nesisekelo ngokufaka umshudo wangaphambi kokushumeka kwangaphambi kokushumeka.
Imishayo namakholomu, imishayo nemishayo kuxhunywe ngamabhawodi wokuqina okuphezulu.
Inetha lokwakhiwa kwemvilophi lenziwe ngefomu elibandayo le-C-style purlin.
5.Udonga nophahla lwenziwe ngebhodi lensimbi enemibala noma amasendeli wensimbi yensimbi yombala, axhumene ne-purlin ngezipikili zokuzibamba.
Iminyango namawindi angakhiwa kunoma yikuphi okungenziwa kube uhlobo olujwayelekile, uhlobo lwe-sliding noma uhlobo lokugoqa ngezinto ze-PVC, insimbi, i-alloy aluminium, iphaneli lesangweji njalonjalo.
Langaphambilini Khanyisa Steel Uzimele Isakhiwo Izindleko Phansi indlu prefabricated
Olandelayo: Modular House Isitsha House Portable Office Prefabricated Container House
Isakhiwo Sokwakhiwa Kwensimbi Esidumile
Isakhiwo Sensimbi Esindayo
Isakhiwo Sensimbi Esikhanyayo
Isakhiwo Sokwakhiwa Kwensimbi
Isakhiwo Sokwakhiwa Kwensimbi Esinezitezi Eziningi
Ukwakhiwa Kwensimbi Nezakhiwo
Steel Uzimele Sakhiwo Isakhiwo
Steel Sakhiwo Isakhiwo Warehouse ka
Isakhiwo Sokwakha Isakhiwo Sokusebenzela
Modular Indlu Isitsha House ephathekayo Office P ...
Factory Supply High Quality Steel Uzimele Isakhiwo M
Indlu Yabasebenzi Yasendlini Eyenzelwe Abantu ...
Flat Pack Modular Ukufakwa futhi kulula ...
K Model Camping lishe laba ngumlotha Ezezindlu Esikhashana ...
Prefabricated Ukwakhiwa K Model Camping Pref ...